नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने विज्ञहरुको चेतावनी, बालबालिका उच्च जोखिममा पर्ने – Sandesh Press
May 18, 2021 244
काठमाडौं । अहिले नेपालमा महामारीको दास्रो लहर चलिरहेको छ । दोस्रो लहरको महामारी तिब्र गतिमा बढिरहेको बेलामा फेरी तेस्रो लहरको चेतावनी दिइएको छ । नेपालमा भाइरसको तेस्रो लहर आउने र त्यसले अब बालबालिकालाई प्रभाव पार्ने चेतावनी दिइएको छ । विज्ञहरुले आफ्ना बालबालबालिकालाई जोगाउन सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो चरणको महामारीमा वृद्ध अवस्थाकाहरुलाई वढि जोखिम देखिएको संक्रमण दोस्रो लहरमा युवा पुस्ता प्रभावित भए । अहिले युवाको मृत्यु धेरै देखिएको छ । संक्रमित हुनेको दर पनि युवाको बढि छ । अब तेस्रो लहरले बालबालिकालाई धेरै प्रभाव पार्ने बताइएको छ । विज्ञहरुले सम्भावित तेस्रो लहरसँग सामना गर्न तयारी थाल्न नेपाल लगायतका मुलुकलाई सुझाव दिएका छन् ।
भाइरसले स्वरुप परिवर्तन गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा पनि तेस्रो लहर चाँडै सुरु हुन सक्ने बताएका छन् । भारतलगायत विश्वभरकै तथ्यांकलाई आधारमा मानेर विज्ञहरुले नेपालमा अक्टोबर÷नोभेम्बरमा तेस्रो लहर आउने दाबी गरेका हुन् । तेस्रो लहरमा बालबालिकासहित खोप नलगाएकाहरू बढी जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यसै क्रममा भारतमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चल्ने निश्चित रहेको त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार वैज्ञानिक विजय राघवनले नै यस्तो प्रक्षेपण गरेका हुन्। यतिखेर कोरोना भाइरसको फैलावट विश्लेषण गर्दा अब भारत महामारीको तेस्रो लहरमा लपेटिने निश्चित भएको उनले बताएका छन्।
त्यहाँको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन क्रममा राघवनले भनेका छन्‌, ‘तेस्रो लहर आउने मिति नै त हामीलाई थाहा छैन, तर अब कोरोना प्रोटोकल निरन्तर पालना गर्दै महामारीको तेस्रो लहरसँग जुध्न तयार भएर बस्नुपर्छ।’
उनले भनेका छन्, ‘हामीले कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। यस भाइसरबारे वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। भाइरसमा भइरहेको बदलाव पहिचान गर्न खोजिरहेका छौँ, अब यससँग जुध्न मानिसहरू तयार भएर बस्दा हुन्छ।’
Prevखुसीको खबर ! नेपालमै अक्सिजन सिलिण्डर उत्पादनको सफल परीक्षण
Nextयी महान पुरुष जसले कोरोना लागेको बिरामीलाई तन्नामा बोकेर एम्बुलेन्स र अस्पतालसम्म पुर्याएर बचाए
मध्यरात एउटै ओछ्यांनमा भेटीएका देवर भाउजु सम्पर्कमा आए,हामीले ठुलो गल्ती गर्यौ भन्दै रुवाबासी-भिडियो हेर्नुहोस्
अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी निशाले किन यस्तो गरिन् ? भयो अत्याधिक रक्तश्राव, सास फेर्नै कठिन